Ukuhlukana Komphakathi wamaPedi
NjengesiSotho nesiSwana, iPedi, ngezikhathi zangaphambi kokunqotshwa, yayihlala emadolobheni amakhulu ahlukaniswe ngamaqembu e-kgoro agxile emaceleni emindeni ethanda umzila wabantwana. Ngamunye waba nesigcawu semindeni, esakhiwe endaweni ephakathi nendawo ehlanganisa indawo yokuhlangana, izinkomo, amathuna kanye nendlu engcwele. Amakhaya ayebalwa ngokulandelana kwezikhundla.
Umfazi ngamunye wayenezindlu zokuhlala ezakhiwe ngamatshe, wajoyina abanye ngochungechunge lwezindawo ezivulekile (i-lapa) ezungezwe izindonga zodaka. Phakathi nendawo kwakukhona i-ngwako wa mollo (indlu yomlilo), isikhala esikhulu esinezihlalo, ukupheka ngezinsuku zemvula. Ingahlukaniswa nendawo yokuhlala nge-mathudi (i-veranda embozwe) ewuzungezayo.
Uhlaka oluyindilinga lwamapulangwe, ububanzi obungamamitha angaba ngu-3 ububanzi, lwakha udonga lwangaphakathi, olufakwe ngaphakathi kodonga (leboto) olwenziwe ngezitini zodaka ezomile. Amagundane ophahleni olusondelene nawo ahlala kulezi zibonda. Uphahla olugxotshiwe lwadlula ngaphesheya kodonga lwendlu, lwakhiwa i-mathudi. Izindwangu ezimbili ezincane (ngwakana) zazivame ukuhlala ngemuva komuzi omkhulu.
Iyunithi yendlu yakhiwe ngodonga olungamamitha angu-1.75 wamamitha angu-9 ubude olwenziwe ngodaka (eyaziwa ngokuthi i-moduthudu), noma emhlanga (eyaziwa ngokuthi i-lefago). Lolu donga lufake umgodla ohlotshisiwe, ukuze izindlu ezihlukene, ezazihlangene nomunye wabafazi abahlukene bomuntu oyedwa, zakha isakhiwo esiyindilinga.
Phakathi kwamakhaya kanye nezindonga ezungezile kwakungatholakala amagceke (lapa), lapho abantu basePedi bachitha khona isikhathi esiningi lapho behlala ekhaya. Indlu ngayinye yayinegceke lomphakathi phambi kwendlu enkulu, lapho izivakashi zazithokozisa khona, kanye negceke langasese ngemuva komuzi omkhulu, okwakhonza amalungu omndeni.
Igama lesi-kgoro, ngaphandle kokukhomba leyunithi eyisisekelo ohlelweni lwezenhlalakahle zePedi, lusetshenziselwa ukuchaza isakhiwo sokwakha isakhiwo sezomthetho nezombusazwe kanye. Ubunye bemizi engafani phakathi kwendlu eyayiqhubekile kwagcinwa ngokuzithoba emkhandlwini wamadoda, ngokuvamile ohlangene nesakhiwo esihlotshisiwe esakhiwe ngaphansi komuthi omkhulu.
UKgoro kwakusho zombili umkhandlu kanye nendawo yokuhlangana. Namuhla, abantu abaningi abafuna ukuhlala ngesitayela sanamuhla baye bashiya isitayela esizungezile sokwakha ngokuthanda izindlu ezinamathelisi, izindlu eziphahleni.
Ukuhanjelwa okuphoqelelwe kanye nezinhlelo zokuhlela ezolimo ezigqugquzelwa nguhulumeni kuye kwasho ukuthi izindawo eziningi ezisha, kanye namaphethelo abantu abaningi asebekhulile, zakhiwe izindlu ezakhiwe ekwakhiweni kwegridi, ezithathwe imindeni ngayinye engahambisani nomakhelwane babo.